Izikhathi lapho kufanele ugqoke izibuko zeqhwa - ULLER
Lezi yizikhathi ezi-5 lapho kufanele ugqoke izibuko zakho zeqhwa
Ukunakekela umbono wakho lapho uqhuba imidlalo efana neqhwa noma ukushushuluza eqhweni kubaluleke kakhulu ukufeza izinhloso zethu. Futhi ukusebenzisa ukubhangqa okuhle kakhulu kwe- Izibuko zeSki (ebizwa nangokuthi buso noma amagagasi eqhwa) kubaluleke njengokugqoka ama-skis noma i-snowboard yakho, noma amabhuzu nezingubo ezifanele ezishisayo. Amaphesenti amaningi amakhono ethu emidlalweni yeqhwa ancike ebangeni lethu nasekhonweni lokubuka, futhi iqiniso ukuthi kuphela ngokuhamba phambili amabhlogo we-blizzard uzokwazi ukufeza umbono owudingayo lapho sizijwayeza imidlalo ye-adventure eqhweni.
Ngabe uzizwa sengathi ukulungele ukunqoba ubungozi bemvelo ezindaweni ezineqhwa? Qhubeka ufunda futhi uthole izikhathi ezi-5 ezibaluleke kakhulu lapho ngokungangabazeki uzokwazisa ukuhamba nokuhamba phambili kakhulu amagagasi eqhwa!
LESI YISIKHATHI ESIBALULEKE KAKHULU SOKUGQOKA IZINQOGO ZAKHO!
1. LAPHO IBHOLA LISONDELA
Iziphepho ezinemimoya enamandla ngokwedlulele zaziwa njenge- "blizzard" noma "snowfall" lokho kukhawulela ukubonakala kwethu kube ngaphansi kwamamitha ambalwa ukusuka. Lezi yizimo ezeqisayo ezenzeka ezindaweni ezineqhwa, ngochungechunge lwezingozi ezihambisanayo ngenxa yokuthi zilayishwa umoya obandayo ngejubane elikhulu. (cishe ngama-56km ngehora) ngamazinga okushisa angaphansi kuka-zero degrees centigrade.
I-Las blizzards zihlukaniswa zibe "phansi" noma "phezulu" kuye ngendawo yazo. Lezi yizimo ezingathinta kanzima umgijimi eqhweni uma engazilungiselele kahle futhi evikelwe ukubhekana nazo.
Ingabe Ama-Blizzards Ayingozi?
I-Las blizzards zenzeka ngamandla amakhulu kakhulu ahlala okungenani amahora ama-3, lapho iqhwa, amagatsha, isichotho namatshe kuhamba kuzo zonke izinhlangothi. Lokhu kukhawulela kakhulu ukubonakala nokuphepha komdlali, futhi kungalimaza kakhulu umzimba, ikhanda namehlo. Lo mzuzu, lapho kuvela i-blizzard, ungukhiye kubo bonke abathandi bezemidlalo eyedlulele, ngoba kufanele bakulungele kahle ukubathatha, ngokwengqondo nangokomzimba. Ngaphezu kwalokho, kuzobaluleka ukuphatha imishini efanele uma sizobhekana nesiphepho sezulu lapho sizijwayeza ezemidlalo eqhweni. Khumbula ukuwulungiselela kahle lo mzuzu ngezinto ezidingekayo futhi khumbula njalo ukugqoka kahle izingilazi zakho ze-blizzard lola umbono wakho ngaphansi kwalezi zimo. Uma uzithola usendaweni enesiqhwa sezulu, funa indawo yokuhlala eduze kwakho uma kungenzeka, yize izincomo zizohlala zibuyele emuva emuva noma okungenani zinciphise ukuphakama ngangokunokwenzeka.
2. NGESIKHATHI SAMAHORA AMAKHULU
Iyini ingozi yelanga ngezikhathi eziphakeme?
Ungalokothi ukhohlwe ukuthi imisebe yelanga ithuthukiswa ngezikhathi eziphakeme (kusukela ngo-11 ekuseni kuya ku-15 ntambama), ikakhulukazi uma ilanga likhipha iqhwa elimhlophe. Uma lokhu kwenzeka, izingozi zokulimala kokuhlupheka nokushiswa yilanga esikhumbeni nasemehlweni ziyanda. Ngesikhathi samahora aphezulu, umphumela olimazayo wemisebe ye-ultraviolet uyakhula, ngoba umphumela wawo ebusweni bomhlaba uyanda. Khumbula ukuthi ehlobo, i-9: 00 am nayo ibhekwa njengehora lokujaha eliyingozi empilweni nasekubukekeni kwamehlo.
Lapho sishibilika eqhweni naseqhweni ngezikhathi eziphakeme, ikakhulukazi emini, kubalulekile ukuthi umsubathi ahlale egqoka amagilavu ​​ngaphezulu kwamehlo (hhayi ngaphezulu kwekhanda). amabhlogo we-blizzard noma imaskhi ye-ski esezingeni. Lokhu kwenzelwa ukubhekana nokukhanya okunjalo okweqile ezindaweni ezineqhwa nokuvikela amehlo ekulimaleni okuqondile emisebeni yelanga. Hlala wazi ukuthi umbono wethu osebenzayo nalapho sizijwayeza imidlalo ye-adventure kufanele ngaso sonke isikhathi uvikeleke kahle kakhulu futhi akumele neze wehliswe. Kungenzeka ukuthi ukukhanya okuningi kungathinta umbono wakho ukude naseduze uma ungagqoki izibuko ezinhle zeqhwa, futhi akunconyelwa ukuyekethisa ukucaca okubukwayo.
Khumbula ukuthi, ngaphandle kokuthi amahora wokuphakama kosuku ayingozi kakhulu empilweni yesikhumba sethu namehlo ethu, lokhu akusho ukuthi amanye amahora nawo ayingozi, ngoba ayingozi. Imisebe evela elangeni ihlale ikhona, kusukela ekuseni kuze kuhlwe, noma ngezinsuku ezinamafu. Imisebe yelanga iyakwazi ukudlula kulawo mafu! Ngokuqinisekile uzokwazisa ukuthatha okuhle amagagasi eqhwangaso sonke isikhathi.
3. EMincintiswaneni Yezemidlalo
Esinye sezikhathi ezibaluleke kakhulu kuwo wonke umgijimi oweqile yi imincintiswano yezemidlalo. Ukomela i-adrenaline yabasubathi abancintisana emikhakheni ehlukene nakwezemidlalo eqhweni kucishe kunganeliseki. Emincintiswaneni yezemidlalo asikho isikhala sokungabaza, kuphela ukuzethemba, ikhono, ithalente nomoya wokuncintisana, kodwa futhi kubalulekile ukuphatha yonke impahla efanelekile.
Ngezikhathi zokuncintisana ubeka konke, futhi kumele ahlome kahle futhi akulungele. Uma uzijwayeza ukushibilika eqhweni noma eqhweni, ukugxilwa kwakho kufanele kugxile ngokuphelele ekufinyeleleni umgomo nasekuqhubeni kahle, ngakho-ke uma unezimbalwa amabhlogo we-blizzard igqoke kahle enakekela futhi ivikele uhla lwakho olubukwayo lapho ubamba iqhaza emincintiswaneni eyeqisayo eqhweni, ngokuqinisekile konke kuzoza ngokwemvelo.
4. UMA UYISIQALO
Ngabe kufanele ngigqoke ama-goggles eqhwa uma ngingumqali?
Kufanele uphathe izigqoko zeqhwa noma imaski yeqhwa ngaso sonke isikhathi, noma ngabe usaqala noma uyena oqhekeke kakhulu kulo mdlalo.
Uma uzethula emidlalweni yeqhwa, impela ufunda okuncane ukuthi ungahamba kanjani eqhweni, ukuthwala ama-skis noma ibhodi lokushibilika eqhweni ngesandla lapho ukhuphuka umqansa ... kuleso sigaba lapho nje uwa khona uba ukuphakamisa.
Futhi ukuthi lapho siqala kwezemidlalo ye-adventure nemidlalo yeqhwa siqala ekuqaleni ezinyakazweni ebezilokhu zenziwa ngochwepheshe iminyaka, ngakolunye uhlangothi kulula futhi ngakolunye kuyinkimbinkimbi kakhulu, kepha uma ungumuntu ozijabulisa weqiniso akukho okukuvimba lapho uhamba. Kepha akubalulekile kuphela ukuthi ungami lutho, kubalulekile ukuthi konke okwenzayo kukuqhubele phambili. Manje ubuka imincintiswano, uya emakilasini futhi uzijwayeze okuningi ukuze ulungele ukuthatha isinyathelo, kodwa kancane kancane uzobona ukuthi lezo zinqumo ezincane ozenzayo endleleni zikwenza kanjani ube ngumsubathi omkhulu ongaba yikho.
Kancane kancane uzokwazi imishini okudingeka uyithathe, okokugqoka okushisayo, amabhuzu, ibhodi noma ukushibilika eqhweni, isigqoko sokuzivikela nesakho imaskhi ye-ski. ¡¡Thola okufanelekile kuwe futhi uzizwe ukodwa nomdlalo!
Uzobona ukubaluleka kokuphatha yonke imishini oyidingayo, ikakhulukazi leyo amabhlogo we-blizzard lokho kuzovikela umbono wakho nobuso bakho ngenkathi uzulazula eqhweni.
5. UMA UDINGA AMALENSI OKHETHEKILE, OKULUNGISELEKILE NOMA AMABANGA
Uma unezimo zamehlo ezifana ne-presbyopia, hyperopia noma i-astigmatism nakanjani udinga ukuzithenga amagagasi eqhwa okukuvumela ukuthi uvumelane nelensi ephindwe kabili, ukuze izimo zakho zokubuka zihambe kahle kakhulu lapho uzijwayeza ukushibilika eqhweni noma eqhweni. Kuzofanele ube nelensi ekhethekile eyenziwe ngefomula yakho, kepha kubo imaski oyithengayo kufanele ibe njalo izipikha ze-ski kazibuthe ezishintshanayo.
Ingabe zikhona izingqinamba eziguquguqukayo?
Kusetshenziswa buso obuguquguqukayo be-ski futhi kunezinzuzo eziningi. Okokuqala, baqinisekisa ukubona okwanele futhi okwesibili kulula ukujwayela noma ukwengeza isiqeshana esibonakalayo esinamalensi aphumelele lapho kudingeka. Khumbula ukuthi akukhuthazwa ukuzijwayeza noma yimuphi umdlalo ngezibuko ezijwayelekile; Lokhu kufanele kube okukhethekile futhi kuvumelane nesimo seso lakho.
Uma ungomunye wabaphethwe yisimo esihlukile njengokuzwela kwesithombe, kuyadingeka futhi ukuthi uphathe okuhle amabhlogo we-blizzard lokho kukuvumela ukuthi ushintshele esigabeni samalensi owasebenzisayo ezingilazini zakho.
Khumbula ukuthi isimo sezulu nokukhanya ezindaweni ezineqhwa kunamandla kakhulu kusuka kokujwayelekile, futhi kungahluka kakhulu kusuka kumzuzwana kuya komunye. Uma unayo Izibuko zamagnetic ezinamalensi ashintshanayo Kuzoba lula kuwe ukusebenzisa efanele lapho uyidinga! Cabanga nje ukukwazi ukuqaqa bese ushintshanisa eyakho amagagasi eqhwa ngemizuzwana embalwa!
LANDELA LEZI ZINCOMO ZOKUKHETHA AMAKHASI ANGCONO KAKHULU E-VENTISCA!
Ungayikhetha kanjani i-goki enhle kakhulu?
Kufanele babe nokuvikelwa kwe-UV-400 okuvikelwa ngama-99% noma nge-100% ngaphandle kokukhetha, noma uzolimaza iso lakho kwinqubo.
Thenga nge amabhlogo we-blizzard ngama-lens agijimayo aguqukayo ukuze ukwazi ukukhetha ngokushesha futhi kalula isigaba esigcwele seglasi sohlobo ngalunye lwesimo sezulu nokukhanya.
I-Las amagagasi eqhwa oyikhethayo kufanele ikunikeze ukucaciseleka okuhle kakhulu kwe-optical, nombono oyindilinga ofanele ukukhomba indawo ehlukahlukene eneqhwa lapho ushibilika eqhweni noma eqhweni. Lokhu kukunikeza umbono omuhle wemithambeka nemithambeka, kanye nokuphazamiseka okuncane nokubona okuhle kakhulu komngcele.
Khetha Izihlahla ze-blizzard inkungu ezinsukwini ezinesiphepho, i-blizzard nokubonakala okuphansi. Amaski okushushuluza angamasendlalelo amabili anembatho elwa nenkungu yiyona enconywa kakhulu. Lokhu kunikela ngohlelo lokungenisa umoya lwangaphakathi oluzokhipha ukushisa kwizibuko zakho zokushibilika eqhweni.
Ukuthenga amabhlogo we-blizzard ilula futhi inamateyipu amahle wokulwa nokushelela ukuze ilunge kahle ekhanda lakho nasekhanda lakho lokuzivikela. Ukujiya kungcono!
Bheka kahle ukuthi izibuko zakho zeqhwa zivunyelwe i-CE futhi ziyahambisana nezindinganiso zokuphepha zase-Europe.
Khetha i-ski mask enhle kakhulu Kulula kakhulu ukukwenza! Mane ukhumbule ukuthi kuzoba umlingani wakho omuhle ukuvikela amehlo akho emisebeni nasekukhanyeni okuboniswa yiqhwa nezinto ezikhona jikelele: amagatsha, iqhwa, izinambuzane ...
Ukusebenzisa imishini efanele lapho ushibilika eqhweni noma eqhweni kubalulekile kuwe ukuze ujabulele futhi uzizwe i-adrenaline ngokugcwele, futhi lokho kufaka, ngaphandle kokungabaza, okuhle izibuko zeqhwa. Ungabe usalinda isikhathi eside ngalo!
Ukugqoka izibuko zokushushuluza kubalulekile lapho sizijwayeza lo mdlalo nganoma iziphi izinhlobo zawo.Uvele uyazi ukuthi ziyini izindlela zokushushuluza? Qhubeka ufunde ukuze wazi izindlela ezinhle kakhulu
Imicimbi yezemidlalo ehamba phambili ibuyile ngonyaka we-2021!
Ukunaka abasubathi! Imicimbi yezemidlalo obuyilindile isivele inosuku lwayo lokugubha u-2021. Usuyibambile? Yebo, unyaka ogcwele ezemidlalo nokuzijabulisa uyeza! Thatha i-vis